Fampiantsoana ny Me Razafinjatovo Willy: “Tsy maintsy miteny ny manjo ny fireneko aho » | NewsMada
Fampiantsoana ny Me Razafinjatovo Willy: “Tsy maintsy miteny ny manjo ny fireneko aho »
Tsy nitsitsy fitenenana. Nahemotra ho amin’ny 2 aogositra izao indray ny fanatrehan’ny Me Razafinjatovo Willy ny filankevi-pitsi-pifehezana (Codis) eo anivon’ny holafitry ny mpisolovava, tokony ho natao omaly. Manoloana izany, nahitsy ny fanehoan-keviny. “Efa nisy feo tonga aty amiko fa misy baiko avy any Iavoloha ny amin’ny hanampenam-bava ahy sy hampitsahatra ny fitsikerako ny fitondrana… Tsy ho azony amin’izany izahay satria olom-pirenena ny tena, ankoatra ny maha mpisolovava ka manana zo hiteny ny tsy mety eto amin’ny fireneko aho”, hoy izy. Nanteriny fa tsy maintsy tsikerain’ny vahoaka hatrany ny tsy mety ataon’ny mpitondra, indrindra fa ny olom-boafidy. Tombanany fa anisan’ny anton’ny fampiantsoana azy ny fihetsika sy ny fanehoan-keviny tsy manaiky lembenana ary ny tsy fihemorany hatramin’ny farany manoloana ny tsy rariny.
Manitrikitrika ny gaboraraka ataon’ny fanjakana
Eo koa ny fijoroany amin’ny fiarovana ireo sokajin’olona marefo na sahirana iharan’ny tsindry hazolena na tratry ny antsojay samihafa. Tsy vitan’izany fa anisan’ny sahy manitriktrika sy mamotsipotsitra ny gaboraraka ataon’ny mpitantana isan-tokony ny tenany.
Etsy andaniny, nohamafisiny fa tsy ara-dalàna izany fiantsoana azy hiatrika ny Codis izany. “Tsy voalaza ao anatin’izany ny antony. Tsy vao voalohany izao fa efa fanindroany ary tsy mazava tahaka izany ny antony”, hoy ihany i Olalah.
Manoloana izany rehetra izany, andrasana ny ho tohin’izao fampiakarana Codis ity mpisolovava ity izao.